42+ amin'ireo teny nisekoi manan-danja indrindra (Miaraka amin'ny sary) - Hafa
Raha anime romance ianao dia tadiavo ireto teny nisekoi 42+ misy heviny ireto
Teny nisekoi nalaina avy amin'ireto litera anime manaraka ireto:
Nisekoi dia andian-tantaram-pitiavana / hatsikana momba ny fitiavana sy ny tantaram-pitiavana. Fa ny mampihomehy dia: Nisekoi dia midika hoe 'fitiavana sandoka' amin'ny teny Japoney.
Tsy latsa-danja na oviana na oviana, ny fitanisana Nisekoi tsirairay avy dia lesona amin'ny fitiavana, ny tantaram-pitiavana ary ny olana rehetra (ary ny zavatra tsara) izay miaraka amin'ireo fihetsem-po ireo.
Nolazaina tamin'ny fomba fijery sy tantara tsirairay ao amin'ny andian-tsarimihetsika.
Andao hiditra ao amin'ireto teny nalaina anime ireto izay hahafahanao mifandray!
Lisitry ny teny nisekoi tsara indrindra:
'Fa… Raha ianao no karazan'olona afaka manokan-tena ho an'olona tahaka izany, dia alefako aminao izay misy olona any izay ho tia anao.' - Raku Ichijou
'Mety olon-tiana sandoka fotsiny aho, fa raha misy ny mitranga… Izaho no hiaro anao.' - Raku Ichijou
'Efa zatra manao jirofo aho sy izy rehetra. Saingy Ny kapoka amin'ny tarehy dia mamparary fo kokoa. ” - Raku Ichijou
“Ny adala ihany no haharitra amin'ny fanaintainana tsy ilaina!” - Raku Ichijou
'Marina ny anao. Na hitako indray io zazavavy io na tsia, tsy manova ny zava-misy fa manan-danja amiko io fampanantenana io. Handeha hitandrina azy io aho. ' - Raku Ichijou
'Ka mahatsapa ho tsy manao ny marina ve ianao sa zavatra hafa? Tsy marina izany. Tena zavatra mahafinaritra ny ho tonga olon-kafa. Raha manontany ahy ianao… Ny zava-dehibe eto dia ny tokony hisafidiananao safidy mazava amin'izy mianadahy. ” - Maiko Shu
“Ataovy izay hahazoana antoka fa tsy hanenenako… izay hitadiavana tena fotsiny, tsy inona intsony. Ao tsara. Ny tiako holazaina dia fahatsiarovana lehibe ho azy io, sa tsy izany? ” - Maiko Shu
'Ny faharetan'ny fotoana nitiavanao dia tsy ny zava-dehibe ihany, sa tsy izany?' - Maiko Shu
'Amin'ny farany, miankina amin'ny olona voakasik'izany ny fananana herimpo hibaboka.' - Maiko Shu
'Nanapa-kevitra ny handray an'io fitiavana tsy voavaly io aho, ary apetraka mangingina ao am-paran'ny foko ho toy ny pejy mangidy tamin'ny fahatanorako.' - Maiko Shuu
'Izao fotsiny… ny fitiavana izay nitohy nandritra ny taona maro nefa tsy nania dia zavatra izay, ho an'izay mahita azy, dia tsara tarehy sy tsy azo omena tsiny. Saingy… na dia fohy aza izy io, ary mety ho zavatra diso sy miondrika eo anelanelany, raha matotra amin'ny fahatsapany izy ireo… dia heveriko fa tsy zavatra tsy tsara tarehy izany. ' - Maiko Shu
“Mba hankafizako tsara ny fahatanorako. Mety efa niresaka zavatra toa an'io izy. Miaina tsy mieritreritra ny vokany na izay manodidina ahy amin'ny heriko rehetra. Izany no momba an'io. ' - Maiko Shu
'Holazaiko aminao ny fomba henoko hahalalako raha tianao ny olona iray na tsia. Alao sary an-tsaina, rehefa mahita avana ianao, rehefa nahita kintana fitifirana, rehefa nahita kafe tianao ianao, rehefa 777 yen na zavatra hafa ny fiovanao. Raha Raku dia tsara ny maka sary an-tsaina ny fotoana nitrangan'ny ravina iray tao anaty diteo. Rehefa nahita filentehan'ny masoandro mahafinaritra ianao, na raha hitanao ny mozikao, na nahazo loka tsara ianao tamin'ny loteria, ireo zavatra kely amin'ny fiainana andavanandro. Rehefa sendra ireo fahasambarana na vintana kely ianao, iza no olona voalohany tianao hilazana izany? Endrik'iza no tonga tao an-tsainao? ” - Maiko Shu
“Diso ny fahitana azy ireo mitovy. Foto-kevitra mampihetsi-po izy io, fa ny lanjan'ny zavatra zakainao amin'ny herinao manokana sy ny an'ny olon-kafa dia hafa. ' - Maiko Shu
“Ry, a! Tena mila tsipelina azy ho anao ve aho? Tsy misy zavatra azonao atao raha tsy mihetsika samirery ianao. Toy izany koa amin'ny tantaram-pitiavana - ny hany fanantenanao dia ny ho mahery setra kokoa. ' - Marika Tachibana
'Tsy ho tonga hankahala anao aho! Sanatria! Na inona na inona hitranga amin'ny ho avy! ” - Marika Tachibana
'Tsy afaka mahavita na inona na inona ianao raha tsy mihetsika. Fanafihana tanteraka ny fitiavana. ” - Marika Tachibana
'Manomboka eto dia ho azonao antoka fa tsy manadino ahy ianao!' - Marika Tachibana
“Niaiky aho fa fantatrao !? Imbetsaka! Na dia fantatro tamin'ny vavako aza ny valiny… tamin'ny feoko! Niaiky aho fa fantatrao !? Efa nijery an'i Raku mahitsy tamin'ny masonao ve ianao !? Izay ihany ve no azonao ho an'ny Raku !? Farafaharatsiny mba farany, mila milaza marimarina kokoa amin'ny tenanao ianao !! Raha tena tianao izy, dia tsy afaka mody tsy misy toa izany! ” - Marika Tachibana
'Mitazona ny fihetseham-ponao toy izany… mieritreritra ianao fa tsy hisy olona haratra satria tsy avelanao haseho amin'ny olona izany? Mitovy amin'ny fandehanana mandratra ny rehetra ihany izany! ' - Marika Tachibana
'Tsy misy ho anao eto amin'ity izao tontolo izao ity raha tsy mihetsika ianao mba hahazoana azy.' - Marika Tachibana
'Tsy maharary ny fitiavana rehefa tia ilay olona mety ianao.' - Marika Tachibana
“Oh? Inona no mahagaga anao !? Mihevitra ve ianao fa olona hilavo lefona aho rehefa avy nolavina indray mandeha fotsiny !? Na hopitaly na tsia, hanohy handoko ny tenako aho ary ho lasa vehivavy mahatalanjona kokoa ary hiverina aminao! ” - Marika Tachibana
'Tsy mikasa hamaly ny fihetseham-pon'ny zanako vavy ianao, sa tsy izany? Ka inona no manome anao ny zony hiteny amin'izany fomba izany? Angamba ianao te hampitony ny feon'ny fieritreretanao meloka. Tsy hiantso izany 'fihatsarambelatsihy' izany ve ianao? ' - Chika Tachibana
'Tsy misy dikany ny fomban-drazana izay tsy mahasoa ny olona ankehitriny.' - Chika Tachibana
5. Teny nalaina avy amin'i Kosaki Onodera
“Fa maninona ianao no nitsoaka, Chitoge-chan? Tsia… Tsy tiako ity… Tsy ho faly aminao aho kivy fotsiny ... Ho tiako amin'ny olona iray ihany ny hiafaranao. Maharary, azo antoka fa Chitoge-chan, tianao azy ampy tsy hahafahany miatrika azy intsony aorian'izany, sa tsy izany? Na iza na iza hiafarany, tiako ho afa-po aho rehefa mitranga izany. Nieritreritra aho fa hitovy ny hevitrao. Misy antony ve tsy mety hitrangan'izany? Lazao amiko Chitoge-chan. ” - Kosaki Onodera
'Tena halako izany rehefa malahelo mafy anao aho ary tsy afaka manao na inona na inona momba an'io.' - Kosaki Onodera
'Tsy afaka nanontany tena indray aho… Tena adala aho.' - Kosaki Onodera
“Raha vantany vao hitanao hoe iza no nanaovanao toky, tena ho afaka ho tia azy ve ianao?” - Yui Kanakura
Loharano sary: Deviant Art
“Tsy nikasa ny ho raiki-pitia mihitsy aho.” - Seishirou Tsugumi
'Tsy afaka ampiana io, raha tsy misy azonao atao, dia tsy misy zavatra hafa azonao atao.' - Seishirou Tsugumi
'Tsy misy lalàna milaza fa tsy afaka manenjika olona iray ianao, satria fotsiny hoe efa tia olon-kafa izy.' - Ruri Miyamoto
'Aza mamoy tena mihitsy rehefa miezaka mihazona olona tsy miraharaha ny famoizana anao.' - Chitoge Kirisaki
'Tsy ho irery ianao.' - Chitoge Kirisaki
'Aza manahy rehefa miady aminao aho… Mampiahiahy rehefa mijanona aho satria tsy misy na inona na inona sisa hiadiantsika.' - Chitoge Kirisaki
“Indraindray ny fahalalana zavatra… Ratsy noho ny tsy fahalalana na inona na inona.” - Chitoge Kirisaki
“Samy manana ny fahaizany ny tsirairay. Ary midika izany fa ny tsirairay dia tokony hampiasa amin'ny fomba feno izany fahaizana izany. ” - Chitoge Kirisaki
'Na dia miaraka aminao aza aho dia tsy afa-po… Senpai… Ianao ve ilay andriana notadiaviko?' - Haru Onodera
“Handeha ianao… Tokony ho mpinamana be koa izahay. Tena ho irery aho. ” - Haru Onodera
“Misy karazan'olona roa eto amin'ity izao tontolo izao ity. Izay mihinana ny zavatra ankahalainy aloha, ary izay mihinana azy no farany. ” - Fukuda Ninjirou
“Tsy vola ny fotoana. Tsy afaka mividy fotoana ve ianao izao? ” - Hana Kirisaki
“Aminay dia sarobidy noho ny vatosoa rehetra ianao. Afaka milamina ve ianao raha avelanao any ivelan'ny faritry ny tranonao ny fanananao sarobidy indrindra? Ny harena dia zavatra tazominao miaraka aminao amin'ny fotoana rehetra. Ara-dalàna izany. ” - Claude
40 amin'ireo tsonga Anime tsara indrindra avy amin'ny Clannad
Ireo teny tokana misy heviny avy amin'ny lainganao amin'ny volana aprily tokony ho hitanao